KHARAJKA KHARASHKA KHUDRADDA CAGAARAN EE POLAND AYAA KOR U KICIYAY SHIRKADAHA UKRAIN - UKRAINE
Kharajka kharashka khudradda cagaaran ee Poland ayaa kor u kiciyay shirkadaha Ukrain
Tan iyo bilawgii toddobaadkan, qiimaha khudradda cagaaran ee laga keeno dalalka kale ee Poland ayaa bilaabay inay hoos u dhigaan kaddib markii kororka sicirka degdega ah. Sababtoo ah canshuuraha waaweyn, baahida qajaarka iyo yaanyada laga keeno dalalka kale way daciifiyeen maalmihii la soo dhaafay. Ganacsatada waynaa waxay hadda isku deyayaan inay dib u soo dejiyaan baahida iyagoo hoos u dhigaya qiimaha.
Hawlaha suuqa ee miro iyo khudradda ee Poland ayaa aaminsan, in xilliga la filayo in qiimaha dhimistu uu kordho, qajaarka ka soo baxa beeraha maxaliga ah ayaa bilaabi doona inay ka muuqdaan suuqyada, dhammaadka bisha labbaad goosashada ugu horraysa ee tamaandhadu waxay ka bilaaban doonaan lagu koriyo. Xilligaan waxaa laga yaabaa inuu bilowdo xilli hore sababtoo ah cimilada diiran iyo qorrax leh.
Hoos-u-dhaca kharashka qajaarka iyo yaanyada ee Poland ayaa saameyn doona dakhliga soo saarayaasha reer Ukrain, kuwaas oo dhowr toddobaad waa inay soo ururiyaan dalagyada ugu horreeya ee qajaarka, iyo ku dhowaad March, dalagyada yaanyada. Dumarka badan ee lagu koriyo ee Ukraine sanadkan waxay leeyihiin ujeedooyin aasaasi ah oo ku saabsan suuqa Suuqa, diiradda saaro waayo-aragnimadii sannadkii hore. Sida lagu soo warramey, sannadka 2016, Ukraine ayaa dhoofisay tiro khudradeed oo khudradda cagaaran si ay u noqoto Poland.